Ngaphandle kokungabaza, i-WordPress iyisistimu yokuphathwa kokuqukethwe okuthandwa kakhulu kuma-hobbyists kanye ne-webmasters abaqeqeshiwe ngokufanayo. Inika amandla-25,4% yawo wonke amawebhusayithi emhlabeni kanye nama-blogok angu-76,5 wezigidi kusukela ku-2004.
Ngenxa yokuthandwa okungakahleleki, izinkampani eziningi ze-web hosting zinikeza Ukuchofoza kwe-1-app yokufaka i-WordPress ngokuqondile kusuka kuphaneli yokulawula – okuvumela abasebenzisi ukuba baqale ukwakha isayithi ngaku.
A nqubo önbenza ngokufaka i-WordPress ngqo kwi-szerver yakho yewebhu. Futhi njengoba ibanjwe ku-intanethi, ungafinyelela kudeshibhodi yakho kusuka noma ikuphi uma nje unesidingo se-intanethi.
Isipele Somuntu siqu – Ukuklama nokuthuthukisa indawo yakho yangakini futhi kusho ukuthi usuhlale unesipele ngokuzenzakalela.
Jobb I-Design folyamat – Ukusebenzisa i-WordPress ungaxhunyiwe ku-intanethi ikuvumela ukuba wenze izinguquko zokuklama ngaphandle kokuthinta isipiliyoni sezivakashi ezibukhoma.
Használja a helyi böngészőt a WordPress webhelyen?
Ukufaka i-WordPress kukhompyutha yakho te-Windows legyete-Mac, landela imiyalo engezansi:
Ukufaka i-WordPress kwi-Windows PC, az ukusebenzisa uhlelo olubizwa nge-WAMP, az elmalandwa kusuka kubo weboldal esemthethweni.
Qaphela ukuthi i-WAMP iyatholakala ezinhlokweni ezimbili – 64 bites ne-32 bites. Ukuze wazi ukuthi iyiphi ihambisanayo ne-PC yakho, iya ku-Qala> Izinhlelo> Uhlelo> Mayelana (kubasebenzisi be-Windows 10) noma Qala> Hamba, thayipha ku- "sysdm.cpl" bese uchofoza ithebhu "Okujwayelekile".
Uma ukulanda sekuphelile, qhubeka nokufakwa ngokulandela imiyalo esesikrinini. Funda konke ngokucophelela njengoba i-WAMP, amely az eizikondile ezizofakwa kahle. Ngezansi kukhona amathiphu ambalwa:
Vula isifaki ngamalungelo omqondisi (Chofoza ngakwesokudla> "Futtassa az njengoba umlawuli-t").
Bezárás Skype ngaphambi kokufaka nokusebenzisa i-WampServer.
Uma ubuzwa ukuthi ukhethe isiphequluli sakho esizenzakalelayo, khumbula ukuthi udinga ukuhamba bese uthola ifayela le-.exe. Isu elihle ukuchofoza ngakwesokudla isinqamuleli sedeskithophu sesiphequluli sakho, chofoza "Tulajdonságok," bese uya kuthebhu "Isinqamuleli". Indawo yefayili ye-.exe kufanele ibe yinkambu ye "Cél".
Ngemva kokufaka ngempumelelo nokuqalisa i-WAMP, bheka isithonjana se- "W" kusendaweni yakho yesaziso somsebenzi. Uma lesi sithonjana sibomvu, kusho ukuthi iseva ye-WAMP okwamanje ayixhunyiwe ku-intanethi. Kakhulu, ngakolunye uhlangothi, kubonisa ukuthi iseva iphelele ku-intanethi. Uma kunjalo, manje ungakwazi ukufinyelela iseva yakho ngokuthayipha i- "helyi kiszolgáló" noma i-127.0.0.1 kusiphequluli sakho sewebhu. Ungase futhi ushiye uchofoze izithonjana "W" futhi uchofoze "Indawo yasekhaya."
Ekhasini lakho lelwazi le-WAMP, qhafaza "phpMyAdmin" ngaphansi kokuthi "Amathuluzi." Lokhu kuzokuvumela ukuba a futhi udale i-adatbázis yokufaka kwakho okungaxhunyiwe ku-intanethi ye-WordPress segítségével. Ngaphandle kwalokho, ungathinta u-http: // 127.0.0.1 / phpmyadmin / kusiphequluli sakho sewebhu.
Ukudala i-adatbázis entsha ku-phpMyAdmin, iya ku- "Amadokhumenti" kusuka kumenyu enkulu. Ungasebenzisa noma yiliphi igama oliyithandayo, kodwa kungcono ukusebenzisa into ebonakalayo njenge "wordpress-yendawo." Qaphela ukuthi igaza az adatbázis alilona icala.
Megjegyzés: az i-WordPress a legfrissebb hírek a legújabb információk a legújabb technológia kínai hírességek IPA letöltése iwebhusayithi enkulu. Khumbula ukuthi ukulanda kufomathi yefolda ephoqelelwe. Udinga kuphela ukukhipha ifolda ye-WordPress ku-"www" activphansi kwe-WAMP. Isibonelo, ufake i-WAMP ku- "C: \_ wamp \_", használja a WordPress kusiqondisi alkalmazását "C: \_ wamp \_ www \_".
Ukulayisha i-WordPress, ku-http: // localhost / wordpress /. Ekuqaleni, uzobe usho ukuthi udinga ifayela "wp-config.php". Vele uchofoze ku- "Dala ifayela lokuhlela" ukuze uqhubeke.
Uma usedd, ungaqhubeka nokufakwa kwe-WordPress njengoba ungathanda web-hosting platform. Khumbula ukusebenzisa i- "helyi kiszolgáló" njenge-host host futhi usebenzise igama elifanele le-database oyichazile ngaphambili. Uma kuziwa kumsebenzisi wakho we-MySQL, sebenzisa izimpande bese ushiya iphasiwedi ingenalutho.
Töltse le, és használja az i-WordPress kwi-Mac Mac fájlokat, amire szükség van. Kodwa esikhundleni sokusebenzisa i-WAMP, az ukusebenzisa isofthiwe ehlukene eyaziwa ngokuthi i-MAMP. Njengokuqala, egyedülálló lokhu ngokuqondile kusuka kubo weboldal esemthethweni.
Új kokufaka i-MAMP, qinisekisa ukulungisa uhlelo lokusebenza ukusebenzisa i-Apache port 80 ne-MySQL port 3306 kuqala. Ukwenza kanjalo kukuvumela ukuba uqalise iwebhusayithi yakho yasendaweni usebenzisa i-http: // localhost. Vele uye ku Izintandokazi> Amaports bese ufaka amanani afanele.
Ukwakha adatbázis-adatbázis-MAMP, chofoza "Vula Ikhasi Lokuqala" bese uya ku- "phpMyAdmin." Kusuka lapho, ungalandela izinyathelo ezifanayo kusukela ku-WAMP bemutatója, njengoba kuboniswe ngenhla.